Ahoana ny fiheverana ny laharan'ny milina fikarohana | Martech Zone
Asabotsy 27 Febroary 2010 Zoma, Oktobra 17, 2014 Adam Small
Manampy ny filaharan'ny milina fikarohana ve ny fanehoan-kevitra amin'ny bilaogy hafa? Ny algorithm misy ny laharana Google dia mavesatra amin'ny rohy mifandraika miverina amin'ny tranokalanao. Koa satria ny rohy miverina amin'ny fanampiana ny tranokalanao, tsy misy dikany ve fa ny fanamarihana sy ny famelana ny rohinao na aiza na aiza no hahasoa ny tranokalanao? Tsy marina.
Amin'ity horonantsary farany ity, Matt Cutts (Search Quality for Google) dia miresaka momba ny mety ho loza ateraky ny famelana ireo mpampiasa handefa hevitra miaraka amina spam rohy ao amin'ny bilaoginao. Manana fifehezana ny atiny ao amin'ny tranokalanao ianao, ary raha tratran'ny Google ianao mampifandray amin'ny tranokala spammy dia mety hoheverin'izy ireo ho toy ny spammy ihany koa ny tranokalanao.
Mikasika ny antony mazàna Google ihany koa izy tsy manasazy ny tranonkalanao noho ny rohy maharitra spammy. Raha Google no manasazy tranokala na inona na inona rohy mifandraika aminy, dia hanangana rohy ratsy indrindra ireo mpifaninana amin'ny fiezahana hanala ny fifaninanana amin'ny valin'ny karoka.
Mbola betsaka ny bilaogy tsy manampy rel = "nofollow" toetra manondro rohy fanehoan-kevitra. Fa maninona no misy tompona bilaogy maniry hanao an'io?
A bilaogy dofollow ny rohy fanehoan-kevitra dia valisoa kely ho an'ny mpampiasa izay manampy fanehoan-kevitra sy valiny sarobidy. Ny tompona bilaogy dia mahazo fanehoan-kevitra noforonin'ny mpampiasa sarobidy ary ilay mpitsidika izay mamela ny heviny tsara dia mahazo rohy dofollow. Ny ankamaroan'ny bilaogy mamela ny rohy fanehoan-kevitra dofollow dia mampihena ny anton'ireo fanehoan-kevitra sy rohy ireo, noho izany dia tsy ho afa-mandositra ny fandefasana rohy ianao raha tsy mandray anjara sy manome lanja ny lahatsoratra bilaogy ny hevitrao.
Antony iray hafa ahafahan'ny bilaogy mamela ny fanehoan-kevitra dofollow raha toa ka efa ela ny bilaogy ary tsy manavao ny sehatra matetika ny tompony. Mino izany na tsia, misy bilaogy an'arivony maro izay tsy novaina hatramin'ny namoronana ny toetra rel = 'nofollow'. Betsaka amin'ireo bilaogy no mbola ampiasaina ary manampy lahatsoratra vaovao tsy tapaka. Betsaka amin'ireto bilaogy ireto no maotina akaiky na feno spam amin'ny resaka bilaogy.
Raha manandrana manangana ny mombamomba anao ianao dia tiako izany aza manalavitra ireo lahatsoratra bilaogy miaraka amin'ny hevitra hafa momba ny spam. Mety tsy ho voasazy ianao amin'ny fandefasana rohy eo akaikin'ny rohy spammy, fa matetika i Google dia mamantatra ireo pejy misy spam ireo ary manivana azy ireo amin'ny latabatra rohy.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny ezaka fananganana ny mombamomba anao amin'ny alàlan'ny fandefasana rohy fanehoan-kevitra amin'ny bilaogy dia tsy mendrika hanaovana ezaka satria ireo tranonkala ireo dia mazàna misy rohy fanehoan-kevitra marobe ka ny salan'ny PageRank dia mizara be loatra mba tsy handany lanja be. Blog ny rohy fanehoan-kevitra miaraka amin'ilay toetran'ny rel = 'nofollow' dia tsy hanome lanja ny tranonkalanao.
Tags: backlinksfanehoan-kevitramilina fikarohanaSEO
27 Mey 2010 tamin'ny 10:01 hariva
Ity dia fampahalalana miavaka. Fanamarihana iray azoko ampiana, na izany aza, ny fanomezana valin-teny be dia be amin'ny bilaogin'ny bilaogera hafa dia mety hahasarika anao. Raha vao nanomboka nibilaogy aho dia naneho hevitra matetika tao amin'ny bilaogy ary nanome atiny sy fifanakalozan-kevitra lehibe ho azy ireo. Betsaka no nahatsikaritra ary nanomboka nifandray tamin'ny bilaogiko. Fantatro fa tsy varotra 1: 1 amin'ny backlinks izany, saingy mety hahomby!
Ary koa - nieritreritra aho fa nanitsy ny fomba itondrany ny nofollow sy ny dofollow i Google noho ny zavatra nataon'ireo bandy SEO tamin'ny fanaovana sary sokitra pejy… tsy izany ve no izy?
28 Mey 2010 tamin'ny 3:48 hariva
@Doug - Tamin'ny fahavaratra farany tao amin'ny SMX Advanced Matt Cutts dia nanolotra soso-kevitra fa tokony hieritreritra ny PageRank ho "manjavona" isika rehefa ampiana ilay toetra nofollow. Raha raisinay ho teniny izy dia midika izany fa tsy azonao atao ny manamboatra na misokitra ny PageRank ny tranokalanao amin'ny fampiasana ilay nofollow toetra.
Ho an'ny fahatsorana dia andao lazaina fa ny lahatsoratry ny bilaoginao dia manana sanda PageRank 10. Manana ny fahaizana mampita an'io sanda io amin'ny pejin-tranonkala hafa amin'ny alàlan'ny rohy ianao. Raha mampifandray amina pejy 9 hafa ao anatin'ny tranokalanao sy tranokala ivelany 1 ianao dia very ny 10% amin'ny sanda PageRank izay azonao notohizina hatrany amin'ny tranokalanao. Rehefa noraisin'i Google ny toetra nofollow, dia nanandrana nanampy ireo toetra ireo ny rohy ivelany ao amin'ity scenario ity hitazomana ny pejy rehetra ao aminy. Ny eritreritra dia ny hanamafisana pejy anatiny hafa ao amin'ny tranonkalany. Raha mino an'i Matt Cutts momba ny PageRank misavoana mifandraika amin'ny nofollow isika, dia tsy misy lanjany ny tetika amin'ny pejy PageRank sokitra miaraka amin'ity toetra ity.
28 Mey 2010 tamin'ny 3:49 hariva
Zava-dehibe ny milaza fa mbola misy lanja amin'ny fampifandraisana amin'ireo loharano sarobidy hafa ao amin'ny bilaoginao. Ampitomboina amina horonan-tsary, sary, rohy ary fampahalalana ilaina ny bilaoginao. Mety hahazo sanda PageRank betsaka lavitra ianao amin'ireo izay misafidy ny mampifandray amin'ny lahatsoratry ny bilaoginao noho ny mety tsy hahaverinao amin'ny fifandraisanao amina loharano iray na roa sarobidy hafa. "Manomeza, dia hahazo ianareo", "Mahazo mpanome", karma, sns. Azonao izany. Mety io.
28 Mey 2010 tamin'ny 3:50 hariva
Tiako ihany koa ny manamarika fa manana zon'ny Google tsy hiraharaha ny toetra nofollow. Azo inoana fa tsy hanao tsinontsinona an'io toetra io amin'ny rohy fanehoan-kevitra bilaogy izy ireo. Azon'izy ireo atao anefa ny misafidy ny tsy hiraharaha an'io toetra io amin'ny tranonkala media sosialy malaza toy ny Twitter raha vantany vao mametraka ny kaonty azony itokisana izy ireo. Ohatra iray hafa raha toa ka misafidy ny hanampy nofollow amin'ny rohy rehetra ny CNN.com. Azo inoana fa tsy raharahi Google ny ankamaroan'ny toetrany satria matoky izy ireo fa ny rohy amin'ny CNN.com dia tonian-dahatsoratra fanontana amin'ny tranonkala iray.
Mar 1, 2010 amin'ny 2: 34 AM
efa namaky lahatsoratra bilaogy vitsivitsy momba an'ity lohahevitra ity aho ary toa miresaka momba ny fanehoan-kevitra amin'ny bilaogy avokoa izy rehetra. Ny fanontaniako dia ahoana raha maneho hevitra amin'ny bilaogy dofollow ianao miaraka amin'ireo fanehoan-kevitra antonony tsara izay mifandraika amin'ny tranonkalanao miaraka amin'ny hevitra tena izy? Ahoana no itondran'ny motera fikarohana ireo rohy ireo? Tsy dia misy dikany ve ny rohy amin'ireo hevitra raha oharina amin'ny vatan'ny lahatsoratra bilaogy?
Mar 1, 2010 amin'ny 10: 04 AM
Lahatsoratra tsara, Jeremy.
Na inona na inona sanda, tena misy na tsapa, ny backlinks avy amin'ny bilaogy bilaogy, ity dia ohatra iray izay niavian'ny atiny rehetra.
Ny fandefasana fanehoan-kevitra mifandraika sy mazava ao amin'ny bilaogy dia mbola afaka manampy amin'ny famindrana ireo mpampiasa mankany amin'ny tranokalanao sy ny serivisinao. Amin'ny fametrahana ny tenanao, ny toetranao, ny lazanao any ho an'ny hafa dia manangana ny tenanao ho fahefana tadiavin'ny olona ianao.
Mar 1, 2010 ao amin'ny 11: PM PM
Ny rohy famoahana am-pahamarinana navoaka tao amin'ny bilaogy fanehoan-kevitra izay tsy misy ny toetran'ny rel = 'nofollow' dia rohy mety amin'i Google.
Ny fananganana rohy azo antoka amin'ny alàlan'ny bilaogy mitovitovy / mahazatra amin'ny tsenanao niche dia hahatonga anao hitarika fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao. Raha manome hevitra mahaliana ianao, mampisy lanja ireo lahatsoratr'ireo bilaogy ireo, dia faly ireo tompona bilaogy mandray ireo fanehoan-kevitra ireo ary hamela anao hiala ny rohinao koa.
Manoro hevitra anao aho hanatevin-daharana ny resaka momba ny Inona no mampitombo ny lisitry ny pejin-tranonkala ao amin'ny Startups.com! Afaka manaraka an'io ianao http://bit.ly/cCgRrC rohy hahazoana mahitsy amin'ny fanontaniana sy valiny efa navoakan'ny manam-pahaizana hafa.
Mar 31, 2012 amin'ny 3: 07 AM
Jeremy, raha mampiasa WordPress CMS ny iray dia tsy misy fepetra omena amin'ny fomba voafantina do = araho ny toerana misy ny mpitsikera manokana. Ahoana no fiatrehana izany?
Fanampin'izay, misy ity resaka ity momba ny "tsy tokony hizaranao ny laharan'ny pejy amin'ny tranokala hafa". Misy dikany ve izany adihevitra izany?